Afaka azoko haingana ireo zavatra hita ao amin'ny Amazon?
Ny valiny fohy dia eny, afaka. Ary tsy sarotra ny hitady ny zavatra tena hita ao amin'ny Amazon mba hampidirana azy ireo ao amin'ny lisitrao ary farany dia hihaona amin'izany fangatahana nilainy izany. Ny ilainao dia ny manana fitaovana maotera na tranokala iray mitazona ny zavatra ilaina rehetra momba ny fikarohana fifaninanana ary ny fanaraha-maso ny fitantanana lehibe amin'ny Amazon. Fa ahoana raha miteny aho fa na ny top ho an'ny fikarohana sy ny fitaovana fitiliana aza dia ampahany kely amin'ilay piozila goavambe ahitana ireo fahafaha-maom-baovao rehetra mbola tsy voamarina ho an'ny anjaran'ny mpivarotra mivarotra izany. Noho izany, etsy ambany dia hasehoko anao ny safidy mety ho azonao atao mba hahitana mora indrindra ny zavatra hita ao amin'ny Amazon, ary hahazo karazana hevitra, soso-kevitra nika, ary ny fironana ankapobeny sy ny fihetseham-po amin'ny fividianana izay mety hisy fiantraikany amin'ny fivarotana vokatra eo amin'ny tsena tena feno .
Jungle Scout - Ity fitaovana an-tserasera ity angamba no loharanom-pitaovana tsara indrindra hitadiavana ny fikarohana amin'ny ankamaroan'ny fikarohana zavatra ao Amazonia. Inona avy ireo vokatra atolotry ny mpanjifa amin'izao fotoana izao? Inona avy ireo vokatra ireo no hita amin'ny Amazon? Inona avy ireo nicha mahazo ny lazany? Inona no azonao atao kokoa noho ireo mpifaninana akaiky anao indrindra? Misy diso sy fanapahan-kevitra efa noraisin'ireo mpanohitra ny tsenanao ve ka tsy ho voafandrika toy izany mihitsy ianao? Ahoana no ahitanao ny loharanom-bola miafina amin'izao fotoana izao sy ny fitaovana mety hividianana azy? Ny mpilalao jiro mpilalao jiro dia fitaovana hanomezana anao ny valinteny rehetra ilaina hijanonana amin'ny fifaninanana mivarotra herisetra ary hitondra ny lohan'i Amazon.
Mitazona ny vidiny amin'ny làlana
Keepa - no fitaovam-pampitam-peo farany momba ny vidin'ny sarany amin'izao fotoana izao ho an'ny ankamaroan'ny zavatra hita ao Amazon tantara azo tanterahana ahafahana manatratra ny fironana voalohany amin'ny fampitaovana ny indostrian'ny fivarotana ecommerce sy ny orinasam-pandefasana). Ity rafitra an-tserasera mahomby ity dia atolotra any amin'ny firenena 11 samihafa miaraka amin'ny dikan-teny amin'ny fiteny samihafa hanampy anao amin'ny fampitahana vidiny, fampandrenesana lavareny, fampandrenesana momba ny fahafaha-misaina, lafy lavitra ny vanim-potoanan'ny tantara, ary koa ny fifanarahana farany amin'ny Amazon izay mendrika ny sainao .
Mandeha mitsikilo ireo mpifaninana amin'ny tenimiafina
Fahaizana - dia tenimiafina manan-danja sy fitaovana fikarohana. Ampiasao izany mba hahitanao ny zavatra tena hita ao amin'ny Amazon, mifanaraka amin'ireo teny fohy malaza izay tarihin'ny mpifaninana - ary vita ianao. Ity fitaovana ity dia ilaina ihany koa amin'ny fanatsarana ny hetsika Pay-Per-Click miaraka amin'ny teny fanalahidy tsara indrindra, ary mampiseho anao izay mety ho fanomezan-toky ho an'ny niches miaraka amin'ny sandan'ny tombombarotra azo antoka amin'ny fifaninanana voafetra. Ankoatr'izany, ny habaka dia toa mendrika loatra raha ny fitantanana ny risika sy ireo kisary rehetra mampihetsi-po mba hamaritana ny sandan'ny volanao sy ny varotra, na ohatra, manana fanantenana mazava kokoa ho an'ny tombom-barotra taorian'ny FBA Source .